လူမှုကှနျယကျ မှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ စညျသူဝငျး နဲ့ယှနျးယှနျး ဇာတျလမျး စ/ဆုံး – Shwe Likes
အောကျ တနျးကတြဲ့ လုပျ ရကျတှေ လုပျခံရမယျ လို့ ဘဝမှာမထ ငျခဲ့ဘူး ဒီလိုမြိုးတ ခါမှ မကွုံဘူးခဲ့ဘူး လူ့ပတျဝနျးကငျြမှာနပေီး စညျးမေ စာငျ့ကွတာ အံဩ လှနျးလို့ မိနျးကလေးခငျြး ကိုယျခငျြးမစာ နာပဲသိရကျနဲ့ လုပျရကျွ ကလို့ကိုး တငျတာ အားလုံးကို ဘာမှမပွောပဲ ကိုယျပဲ တသကျလုံး ၆နှဈနီးပါး ငွိမျခံပေးေ နတာ မပွောတ တျလို့မဟုတျဘူး သိက်ခာကမြှာစိုးလို့ ကာကှယျေ ပးနခေဲ့တာ အခုဒါတှတေငျ ရတယျ ဆိုတာလဲ
အစထဲက လကျလှတျေ ပးပီးသားမို့ ၂ ယောကျလုံး လှတျလှတျ လပျလပျကွို ကျလို့ရတယျ တှဲလို့ရတယျ တမျးတမနဘေူး အခု လကျလှတျပေး ထှကျသှားေ ပးဆိုတာ ထှကျ မသှားပဲ ငါ့ကို လိုကျနှောငျ့ ယှကျေ နလို့တငျတာ ငါ့ကို လာမိုကျရိုငျးေ နကွလို့တ ငျတာ အဲဒီ program စထဲ ကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံနတေို့ငျး messenger ကနေ အဲ fan တှဆေဲတာနတေို့ငျး ခံခဲ့ရပမေဲ့ အပွုံးမပကျြ သီး ခံပေးခဲ့တယျ
စစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုငျးေ ပးစားပီး ကိုယျ့ ဟာကိုနေ တာကိုလဲ သပျသပျကွီးေ တှဆဲခံရတာကို ကိုယျ့ဘကျမှာမရှိပဲ အောငျမွငျမှုမှာ သာယာနခေဲ့လို့ ဘာတခှနျးမှ မပွောပဲ လှတျပေးခဲ့တယျ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ ကိုယျနေ ကွရအောငျဆိုပီး Jan31 မှာစပွတျသှားတယျ အဲထဲက တောကျလေြှာကျဖုနျးေ တှဆကျ တောငျးပနျ အိမျတှလော သှားလရောလိုကျပီး ပွုပွငျပါ့မယျ ပွောငျးလဲပါ့မယျ မရှိပဲ မနနေိုငျပါဘူး ပါးစပျကတောကျလြှောကျ ပွောတယျနျော
သူတို့စ ကားပွောပုံအရဆိုရငျ နငျတို့ စကွိုကျတာ FEB17 တဲ့ ရှံ လို့သတေော့မယျ ငါကဖွတျလို့ ငါနဲ့မခှဲနိုငျလို့ နှဈသိမျ့ပေးတာတဲ့ ရိုငျးရိုငျးပွောရရငျ ဟိုဘကျကတယော ကျကလဲ သိရကျသားနဲ့ဖွ ဈကွတယျ ဒီကွားထဲနငျတို့တှဘေယျလိုတှေ ဖွဈဖွဈငါနဲ့မဆိုငျလို့ သီးခံပေး နိုငျသေးတယျ အခုတော့ ငါနဲ့ပွနျတှဲမယျဆိုပီး ငါ့မှေးနပေီ့းတော့ ဆုံးဖွတျကွတယျ အဲဒီထိကိုး ဟိုဘကျကမိနျးမက မှေးနမှေ့ာသခြောလုပျပေးဦး အဆငျပွလေား
ဘဘေီကရတ ယျနျောဆိုပီး ပွောနပွေ တာ အောကျတနျးကလြိုကျကွတာ .. ငါမသိရငျဘယျခြိနျထိခံရမှာလဲ ?? ငါနဲ့ပွနျတှဲမ ယျဆိုပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုကျပီး နငျတို့က ငါ့ဘေးမှာထားပီး miss u koko love u babe ခရီးမှာပြျောခဲ့နျော ဘာဝယျခဲ့ရမ လဲနဲ့ ဖွဈနကွေတာ ဘ ယျလိုစိတျနဲ့လဲဟမျ?? ငါနဲ့ရှိနပေီး 9months anniversary တဲ့ စိတျဓာတျတှကေ ရှကျဖို့ကောငျးလိုကျတာ ငါနဲ့ပွနျတှဲမ ယျဆို ဖွတျလေ မဖွတျပဲ ၂ ယောကျလုံး သိရကျနဲ့ ခှေးဇာတျခငျးကွတာ .. ငါလဲ မဆှဲချေါထားဘူး နငျ့ဘာ နငျငါနဲ့မခှဲနိုငျ ဘူးဆိုပီး ပွနျလာတယျ ပီးတော့ ဖောကျပွနျတယျ ..
ဟိုဘကျကလဲ လကျခံတယျ.. ဒီကွားထဲ ဝရမျးပါလို့ပွေးရတယျ ကိုဗဈဖွဈတယျ ပွတျနတောတောငျ လကျကနျြသံယောဇဉျနဲ့ ငါ့ဘကျက အတတျ နိုငျဆုံးအကုနျ လုပျပေးခဲ့တယျ သူငယျခငျြးတှကေ နငျအမှတျမရှိဘူးလားပွောတာတောငျ ကာကှယျပေးခဲ့ တယျ နမေေ ကာငျးရငျတောငျ ဆေးစားစရာလိုအပျတာတှသှေားပို့ ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့တယျ ဒါတှပွေောနရေတာ နာမညျကောငျးယူနတောမဟုတိဘူး
နငျ့မိသားစုနငျ့အ သိုငျးဝိုငျးအ ကုနျလုံး ငါဘယျေ လာကျကောငျးလဲ အသိဆုံး ၆နှဈ တခါမှခပြွပီး မပွောဘူးဘူး ငါတခါမှ မဖေါကျပွနျဘူးဘူး နငျ့အတိတျေ တှလဲ စိတျမဝ ငျစားအကုနျအကော ငျးပွုပွငျပေးမယျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ တှဲခဲ့တာ အခုတော့ ရငျနာလှနျးလို့ ကိုယျကဘယျေ လာကျကော ငျးကောငျး လုပျရ ကျတာပဲဆိုတာ သိသှားလို့ နာကညျြးလှနျးလို့ အရှကျခှဲတာမ ဟုတိဘူး နငျတို့ရဲ့ အောကျတနျးကြ တဲ့လုပျရ ကျတှကေို မွငျစခေငျြတာ ငါဘယျလိုခံစားရမလဲဆိုတာသိစခေငျြတာ
ကွားထဲ နငျတို့ ဖွဈပကျြနေ တာတှလေဲ မသိဘူး စိတျမဝငျစားခဲ့ဘူး ပွတျနတေဲ့ အခြိနျမှာ .. ပွနျလကျခံပေးတဲ့အခြိနျထိ ဖွဈပကျြနကွေတာ ဘယျလိုမှ လကျမခံနိုငျတဲ့ အောကျတနျးကြ တဲ့လုပျရကျတှပေဲ အစထဲက သိခဲ့ရငျ ပွနျတောငျလကျ မခံပေးဘူး ရှံလှနျးလို့ တယော ကျကလဲ အသဲသနျပွနျလာခငျြတယျ နောကျတယောကျကလဲ အဲဒါကိုလကျခံပေးပီး ကွိတျပီးဖွဈေ နကွတယျ စိတျဓာတျတှကေ အောကျတနျးကလြှနျး လို့ အျောဂလီဆနျတယျ
အခုတော့ ပကျသကျမိခဲ့တဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုပါ ရှံတယျ နိုငျငံရေးတှဖွေဈနတေဲ့ကွားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှကျဖွဈသှားစလေဲတောငျးပနျပါတယျ ဒီလို RS ထဲက အရမျးရုံးထှကျခငျြနပေီမို့ပါ မိုကျရိုငျးနတောတောငိ လကျမလှတျပေးနိုငျကွပဲ ဆကျပီးမိုကျရိုငျးတာတှခေံနရေလို့ပါ လကျလှတျပေးပါတော့ တောငျးပနျပါတယျ
အောက် တန်းကျတဲ့ လုပ် ရက်တွေ လုပ်ခံရမယ် လို့ ဘဝမှာမထ င်ခဲ့ဘူး ဒီလိုမျိုးတ ခါမှ မကြုံဘူးခဲ့ဘူး လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပီး စည်းမေ စာင့်ကြတာ အံဩ လွန်းလို့ မိန်းကလေးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ နာပဲသိရက်နဲ့ လုပ်ရက်ြ ကလို့ကိုး တင်တာ အားလုံးကို ဘာမှမပြောပဲ ကိုယ်ပဲ တသက်လုံး ၆နှစ်နီးပါး ငြိမ်ခံပေးေ နတာ မပြောတ တ်လို့မဟုတ်ဘူး သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ ကာကွယ်ေ ပးနေခဲ့တာ အခုဒါတွေတင် ရတယ် ဆိုတာလဲ
အစထဲက လက်လွှတ်ေ ပးပီးသားမို့ ၂ ယောက်လုံး လွတ်လွတ် လပ်လပ်ကြို က်လို့ရတယ် တွဲလို့ရတယ် တမ်းတမနေဘူး အခု လက်လွှတ်ပေး ထွက်သွားေ ပးဆိုတာ ထွက် မသွားပဲ ငါ့ကို လိုက်နှောင့် ယှက်ေ နလို့တင်တာ ငါ့ကို လာမိုက်ရိုင်းေ နကြလို့တ င်တာ အဲဒီ program စထဲ ကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံနေ့တိုင်း messenger ကနေ အဲ fan တွေဆဲတာနေ့တိုင်း ခံခဲ့ရပေမဲ့ အပြုံးမပျက် သီး ခံပေးခဲ့တယ်
စစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုင်းေ ပးစားပီး ကိုယ့် ဟာကိုနေ တာကိုလဲ သပ်သပ်ကြီးေ တွဆဲခံရတာကို ကိုယ့်ဘက်မှာမရှိပဲ အောင်မြင်မှုမှာ သာယာနေခဲ့လို့ ဘာတခွန်းမှ မပြောပဲ လွှတ်ပေးခဲ့တယ် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ်နေ ကြရအောင်ဆိုပီး Jan31 မှာစပြတ်သွားတယ် အဲထဲက တောက်လျှောက်ဖုန်းေ တွဆက် တောင်းပန် အိမ်တွေလာ သွားလေရာလိုက်ပီး ပြုပြင်ပါ့မယ် ပြောင်းလဲပါ့မယ် မရှိပဲ မနေနိုင်ပါဘူး ပါးစပ်ကတောက်လျှောက် ပြောတယ်နော်
သူတို့စ ကားပြောပုံအရဆိုရင် နင်တို့ စကြိုက်တာ FEB17 တဲ့ ရွံ လို့သေတော့မယ် ငါကဖြတ်လို့ ငါနဲ့မခွဲနိုင်လို့ နှစ်သိမ့်ပေးတာတဲ့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဟိုဘက်ကတယော က်ကလဲ သိရက်သားနဲ့ဖြ စ်ကြတယ် ဒီကြားထဲနင်တို့တွေဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်လို့ သီးခံပေး နိုင်သေးတယ် အခုတော့ ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုပီး ငါ့မွေးနေ့ပီးတော့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ် အဲဒီထိကိုး ဟိုဘက်ကမိန်းမက မွေးနေ့မှာသေချာလုပ်ပေးဦး အဆင်ပြေလား
ဘေဘီကရတ ယ်နော်ဆိုပီး ပြောနေပြ တာ အောက်တန်းကျလိုက်ကြတာ .. ငါမသိရင်ဘယ်ချိန်ထိခံရမှာလဲ ?? ငါနဲ့ပြန်တွဲမ ယ်ဆိုပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုက်ပီး နင်တို့က ငါ့ဘေးမှာထားပီး miss u koko love u babe ခရီးမှာပျော်ခဲ့နော် ဘာဝယ်ခဲ့ရမ လဲနဲ့ ဖြစ်နေကြတာ ဘ ယ်လိုစိတ်နဲ့လဲဟမ်?? ငါနဲ့ရှိနေပီး 9months anniversary တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ငါနဲ့ပြန်တွဲမ ယ်ဆို ဖြတ်လေ မဖြတ်ပဲ ၂ ယောက်လုံး သိရက်နဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းကြတာ .. ငါလဲ မဆွဲခေါ်ထားဘူး နင့်ဘာ နင်ငါနဲ့မခွဲနိုင် ဘူးဆိုပီး ပြန်လာတယ် ပီးတော့ ဖောက်ပြန်တယ် ..
ဟိုဘက်ကလဲ လက်ခံတယ်.. ဒီကြားထဲ ဝရမ်းပါလို့ပြေးရတယ် ကိုဗစ်ဖြစ်တယ် ပြတ်နေတာတောင် လက်ကျန်သံယောဇဉ်နဲ့ ငါ့ဘက်က အတတ် နိုင်ဆုံးအကုန် လုပ်ပေးခဲ့တယ် သူငယ်ချင်းတွေက နင်အမှတ်မရှိဘူးလားပြောတာတောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့ တယ် နေမေ ကာင်းရင်တောင် ဆေးစားစရာလိုအပ်တာတွေသွားပို့ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ် ဒါတွေပြောနေရတာ နာမည်ကောင်းယူနေတာမဟုတိဘူး
နင့်မိသားစုနင့်အ သိုင်းဝိုင်းအ ကုန်လုံး ငါဘယ်ေ လာက်ကောင်းလဲ အသိဆုံး ၆နှစ် တခါမှချပြပီး မပြောဘူးဘူး ငါတခါမှ မဖေါက်ပြန်ဘူးဘူး နင့်အတိတ်ေ တွလဲ စိတ်မဝ င်စားအကုန်အကော င်းပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တွဲခဲ့တာ အခုတော့ ရင်နာလွန်းလို့ ကိုယ်ကဘယ်ေ လာက်ကော င်းကောင်း လုပ်ရ က်တာပဲဆိုတာ သိသွားလို့ နာကျည်းလွန်းလို့ အရှက်ခွဲတာမ ဟုတိဘူး နင်တို့ရဲ့ အောက်တန်းကျ တဲ့လုပ်ရ က်တွေကို မြင်စေချင်တာ ငါဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာသိစေချင်တာ
ကြားထဲ နင်တို့ ဖြစ်ပျက်နေ တာတွေလဲ မသိဘူး စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး ပြတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ .. ပြန်လက်ခံပေးတဲ့အချိန်ထိ ဖြစ်ပျက်နေကြတာ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ အောက်တန်းကျ တဲ့လုပ်ရက်တွေပဲ အစထဲက သိခဲ့ရင် ပြန်တောင်လက် မခံပေးဘူး ရွံလွန်းလို့ တယော က်ကလဲ အသဲသန်ပြန်လာချင်တယ် နောက်တယောက်ကလဲ အဲဒါကိုလက်ခံပေးပီး ကြိတ်ပီးဖြစ်ေ နကြတယ် စိတ်ဓာတ်တွေက အောက်တန်းကျလွန်း လို့ အော်ဂလီဆန်တယ်
အခုတော့ ပက်သက်မိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါ ရွံတယ် နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှက်ဖြစ်သွားစေလဲတောင်းပန်ပါတယ် ဒီလို RS ထဲက အရမ်းရုံးထွက်ချင်နေပီမို့ပါ မိုက်ရိုင်းနေတာတောငိ လက်မလွှတ်ပေးနိုင်ကြပဲ ဆက်ပီးမိုက်ရိုင်းတာတွေခံနေရလို့ပါ လက်လွှတ်ပေးပါတော့ တောင်းပန်ပါတယ်
ဒဂုံဆိပျကမျးမွို့နယျထဲက ခြို့တဲ့ဘိုးဘှားတှေ အတှကျ ခုနှဈရကျသားသမီး အလှူရှငျတှနေဲ့စုပေါငျးပွီး အလှူငှေ (၁၅) သိနျးတိတိ လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ